रास्ट्रपति पुटिनबारे आयो नमिठो खबर, के छ अवस्था ? — Imandarmedia.com
रास्ट्रपति पुटिनबारे आयो नमिठो खबर, के छ अवस्था ?
पुटिनको वरपरका मानिसहरूले उनी के भन्छन् र उनी आफ्नो वरपरको संसारलाई कसरी बुझ्छन् भन्ने कुराको सहजता र स्पष्टतामा उल्लेखनीय परिवर्तन देख्छन्। तेस्तै, रुसी फौज युक्रेनको राजधानी किभनजिकै पुगेको छ।
उत्तर, पश्चिम र उत्तरपूर्वबाट घेरा हाल्दै रुसी फौज किभनजिकै पुगेको हो। युक्रेनका राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीले अ‌ाफ्ना सेनासँग दशकौंपछि ठूलो क्षति सामना गरेपछि रुसले नयाँ फौजहरु युक्रेन परिचालन गरेको बताइरहेका बेला रुसी सेना किभनजिकै पुगेको हो।
यता रुसलाई सबक सिकाउन भन्दै युक्रेनले निर्णायक कदम चाल्न थालेको छ। उसले आफ्नो भूमिलाई अरुको अधिनमा जानबाट रोक्न हरसम्भव प्रयास गरिरहेको छ।
यसैबीच रुसले युक्रेनका शहरहरूमा लडाइँ तीव्र पार्ने तयारी गरिरहँदा सिरियाका भाडाका दक्ष लडाकु भर्ती गर्न थालेको हो। युक्रेनविरुद्ध लड्न त्यस्ता भाडाका कति लडाकु भर्ती हुन तयार भएका छन् भन्नेबारे बताउन अमेरिकी अधिकारीहरूले अस्वीकार गरेका छन्।
उनीहरूका अनुसार कतिपय भाडाका लडाकु रुस पुगिसकेका छन् र युक्रेनमा खटिने तयारीमा छन् ।युक्रेनका लागि लड्न इजरेलका अवकाशप्राप्त अनुभवी सैनिकहरू उपस्थित भइरहेका विवरण आएका छन्।
युक्रेनी रक्षा अधिकारीहरूले रुसले पूर्ण क्षमतामा राजधानी किएभ माथि आक्रमण गर्ने तयारी गरिरहेको चेतावनी दिएका छन्। युक्रेनको सेनाले दिएको पछिल्लो जानकारी अनुसार मस्कोका बलले आक्रमणका लागि आवश्यक सामाग्रीहरू जमा गर्न थालेको छ।
त्यसको तयारी स्वरूप किएभ नजिकै रहेको ईर्पीन शहरमा बख्तरबन्दसहित अन्य हातहतियार बोकेका गाडीहरू अघि बढिरहेको बताइएको छ। सेनाले दिएको सूचना अनुसार रुसी कमान्डरहरूले अघि बढ्ने क्रममा रहेका आफ्ना सेनालाई बेलारुसबाट ल्याइएको तेल उपलब्ध गराइरहेका छन्।
उता अमेरिकाले पनि निरन्तर रुसमाथि अनेकन किसिमका प्रतिबन्ध लगाइरहेका छन्। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडनले रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनलाई तानाशाहको संज्ञा दिँदै युक्रेनमाथि गरेको मानवता विरोधी अतिक्रमणको मूल्य चुकाउनुपर्ने बताए।
युक्रेनमाथि सुनियोजित आक्रमण गरेको भन्दै बाइडेनले रुस अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट एक्लिसकेको बताए ।यसैबीच, एक पछि अर्को प्रतिबन्धको सामना गरिरहेको रुसले १० हजार भन्दा बढी रकम देशबाहिर लैजान नपाइने घोषणा गरेको छ।
अमेरिका, क्यानडा, बेलायत लगायतका देशहरुले रुसी बैंकहरुसँगको कारोबार बन्द गर्दै उनीहरुलाई अन्तर्राष्ट्रिय बैंकहरुको सूचीबाटै हटाएपछि रुसले मुद्राको अभाव हुनसक्ने आंकलन गर्दै पछिल्लो घोषणा गरेको हो।
यसैबीच, रुसी सैनिकहरुले युक्रेनको दक्षिणी शहर खेअरसन पनि नियन्त्रणमा लिएको दाबी गरेका छन्। युक्रेनमा रुसले आक्रमण गरेपछि ६ लाख भन्दा बढी नागरिक विस्थापित भएका छन्। पछिल्लो जानकारी अनुसार त्यहाँ १३ बालबालिकासहित १ सय ३६ जनाको मृत्यु भएको छ। खार्किभ शहरमा मात्र २१ जनाको मृत्यु भएको छ।
यसैबीच रुसको आक्रमणको मारमा परेको युक्रेनलाई विश्व बैंकले ९ अर्ब डलर बराबरको सहायता गर्ने भएको छ। विश्व बैंक समुह तथा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष आईएमएफले संयुक्त रुपमा सो सहायता रकम उपलब्ध गराउन लागेको बीबीसीले जनाएको छ।
यस्तै, सस्तो भाडादर भएको युरोपेली हवाईसेवा प्रदायक विज एअरले सानो दूरीको यात्राका लागि युक्रेनी शरणार्थीहरुलाई एक लाख सीट निःशुल्क उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको छ। एजेन्सी